Ruwaayadaha soomaaliya. Ma ogtahay in gabar soomaali ah ay hogaamiso ururka riwaayadaha iyo masrixiyada Norwey oo dhan
Arashigis 06.04.2021 Comments
Allaha u naxariistee magaalo kutaala dalka Canada waxaa ku geeriyootay fanaanada Khadiijo Cabdulaahi Daleys oo kamid aheyd Fanaaniinta ugu faca weyn uguna caansanaa gayiga Soomaaliya. Fanaanada ayaa u geeriyootay xanuun la sheegay in mudooyinkan uu hayay, waxa ayna ugu dambeyn Fanaanadan u geeriyootay xanuunka hayay sida laga soo xigtay xubno qoyskeeda kamid ah.
Cfmoto zforce 1000 reviews
Khadiijo Cabdulaahi Daleys ayaa kamid aheyd fanaaniintii ugu horeeyay ee Soomaaliya, waxa ayna aheyd Fanaanad caan ku ah heesaha iyo sidoo kale jiliinka ruwaayadaha kala duwan. Xafiiska Shabakada Allbanaadir. Saturday, April 18, Dowlada oo soo bandhigtay Wiil yar oo la sheegay in uu kasoo goostay Al Shabaab Sawirro.
Tirada dadka uu ku dhacay Caronavirus gudaha Soomaaliya oo caawa korortay. Caydiid Ali - April 17, South African President Cyril Ramaphosa extended Helsinki expresses concern as coronavirus infections surge among Somalis April 15, Somali Government confirms 35 more Coronavirus cases April 13, Belgium registers record high of coronavirus deaths April 10, Coronavirus: England patient deaths rise bytaking total to 7, April 9, Cabdi Cade - April 15, Africa to roll out more than 1 million coronavirus tests April 17, Facebook Twitter Youtube.Axmed cali Cigaal wuxuuna galaya fanka isagoo yar oo ah arday waxeyna eheed sanadkii wuuxuuna ku bilaabay Riwayadii la oran jiray Shabeel Naagood waxaa soo alifay xassan Shiikh Muumin, waxaa ku xigatay Riwayadii la oran jiray Yaxaas Dhagaduubwaxaana soo alifay Maxamuud Sangub, waa labadii Riwaayadood ee igu horeeyey ee Ahmed, waxeena ahaayeen kuwii oo ku soo can baxay oo ku noqday Fanaan caan ka ka ah somaaliya.
Sidoo kale horumarkii weynaa ee dhinacaga muusiga uu ka gaadhey Axmed waxey aheyd isaga oo asaasey kooxdii ama groupkii loo yiqiiney Somali Jazz oo soo bandhigay heesihii ugu horeeyey oo soomali ah ee soomaali waligeed aragato oo lagu ciyaari karo. Ahmed runtii wuxu ahaa nin yar marka uu Riwayadaha metalaayay kana heesayey kan a dhexmuuqday fanaaniintii la matelaysay Riwayadahaas Ahmed wuxuu ahaa nin ilaahay hibo u siiyey quwada xaga [fanka]]a iyo codka ah oo uu kaga soo dhex baxi jirey dhalintii u ku jiray markaas amba ha noqdeen kuwa uu kula jiray Iskuulka ama Fanka, Ahmed yaraantiisii wuxu ahaa nin ku xidhan xaga heesaha aadna ula socda.
HAAA waxay ku qaadatay wax yar intuu la meeltegilahaa kuwii uu jeclaa uuna dhegaysan jiray heesahooda in uu noqodo sidooda oo kale.
Ahmed maxaa iska bedelay Fankii? Mar la weydiiyey su'aashaas wuxuu yidhi "markii qurbaha la soogalay wuxuu fanku wuxuu ku xidhnaan jirey dadka somaliyeed hadaynoqoto mid jacayl ah iyo mid kale oo ah figradba markaa fankii kama danbayn Soomaaliya burburkeedii wuxuu yiri qurbaha markaanu nimid sidaanu uga fekeri jiray fanka uguma fekero oo intaa waanu ordaynaa lakiin soomaalia markaanu joognay waxanu ahayn dad u meel go'ay in ay dadka maaweeliyaan waxaamu xooga saarnay maaweelada dadka".
Wuuxuna weli ka dhigaa Riwaayadaha wadanka maraykanka iyo yurub meelo ka mid ah, wuunaa yiri "illhay isagaa caadilee dhulkeenii ha ugu soo hoorsho nabad sida roobka ayaan ku leeyahay daka soomaliyeed ee akhrisanaya qoralkan".
Axmed cali cigaal markii la weydiiyay maxaa kuugu farax badnaa intaad fanka ku jirtay waxuu ku jawaabay markii boqorka codka riwaayad uu waday uu jirraday mar la maraayey magaalada buuloburte ee gobolka hiiraan oo axmed loo yeeray kaalay axmed waxaad metelaysaa riwaayaddii aabaheey ka samraye adiga axmed waxuu ku jawaabay aniga miyaa bedelaa boqorka codka heesahiisa la qaadaa faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq guryo samo iyo durdurkii markuu guray oo iayadana xeraga halka ay maandeeq ka heesto la keeni karin oo aheyd boqorada codka hablaha soomaaliyeed waan kala badbadtay heesahana waan xafidnaa waana ka soo baxay meeshii layga rabay in boqorka aan bedelo maandeeqna hor istaagi karo.
Axmed cali cigaal waa 5 star sababtoo waa heesaa heesha laxanka waa sameeyaayaa music waa tumaa riwayadaha waa metelaa waana allifaa heesaha Axmed waxuu ku jiraa horyaalka fanka soomaaliyeed sida boqorka codka tubeec, maxamed mooge,maxamed yuusuf, samatar, maxamed axmed, cabdinasir macallin, cabdikhadar xasan, axmed mooge, axmed naaji, saalax qaasim, iwm dhinaca hablha sidii hadraawi sheegay khadra dahir, maandeeq, magool, zahra axmed, hibo ohamed maxamed iyo faadumo qaasim.
Ruwaayadaha [ Wax ka bedel wax ka bedel xogta ] Ahmed runtii wuxu ahaa nin yar marka uu Riwayadaha metalaayay kana heesayey kan a dhexmuuqday fanaaniintii la matelaysay Riwayadahaas Ahmed wuxuu ahaa nin ilaahay hibo u siiyey quwada xaga [fanka]]a iyo codka ah oo uu kaga soo dhex baxi jirey dhalintii u ku jiray markaas amba ha noqdeen kuwa uu kula jiray Iskuulka ama Fanka, Ahmed yaraantiisii wuxu ahaa nin ku xidhan xaga heesaha aadna ula socda.
Halka aad ka dhageesan kartid heesahiisa [ Wax ka bedel wax ka bedel xogta ] Heesaha ahmed cali cigaal Maalmo axmed cali cigaal waxuu la heesay hablaha waaberi oo dhan sida shankaroon, saado cali ,zeinab cige, magaool, maandeeq, baxsan,amina cabdulahi ,zahra axmed,duniyo, faadumo qasim, khadra dahir,saafi ducaale,khadiija hiiraan, xaawo hiiraan, hibo mohamed guudoon hibo nuura iyo kuwa oo badan hibo waxuu la qaaday haye fudud, hoo gacanta oo ay maryam mursal kula jirtay, gaaniga siyaad uu la qaaday hibo iyo maryam mursal.
Qeybaha : Fanaaniinta Soomaaliya Muusig. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda. Qalabka Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la'xiriira Soo geli fayl Bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan shay Boggaan soo xigo.
Luqadaha kale Ku dar linkiyada. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga badelay16 Jannaayo Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta.Shaleemo Soomaalida Af-Ingiriis : Cinema of Somalia waa shabakada soo bandhiga filimaantaheesaha Soomaalidaruwaayadaha iyo majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika.
Shaleemo Soomaaligu waa waax ka mid ah Fanka Soomaalida. Guud ahaan, fanka Soomaalidu waa nooc ka mid ah Suugaanta Soomaalida. Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer.
In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da' yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan.
Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaacigaqaraamigaheesaha jaaska, ruwaayadahamajaajiloyinkafilimaantabandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga. Inkasto sanadahan dambe la casriyeeyay, heesaha fanka Soomaalida inta ugu badan waxaa la isticmaala agab sahal ah, sida kabankagitaardurbaankanarsadaturunbadasacabka iyo noocyo kale.
Sida badan, heesaha fanka Soomaalidu waa kuwo degan, dhandhan fiican leh, oo inta ugu badan si sahlan loo sameeyo. Fanka Soomaalida waxaa diyaariya dad badan oo kala duwan, kuwaas waxaa ka mid ah abwaanka qofka sameeya sheeko, gabay, hees iwmlaxanmiistefanaanjilaaatooremuusigyahan iyo kuwo kale. Sida caalamka qiray, dhaqanka Soomaalidu wuxuu qani ku yahay fanka iyo suugaanta.
Samayska midhaha fanka ayaa ah mid aad u cajiib badan. Waxaanu fanku inta badan ka turjumaa nolosha iyo Waayaha Bulshada.
Dhinaca kale heesaha Af Soomaaligu waa kuwo ka duwan caalamka dhan. Aslakooda waxay heesuhu u dhacaan hab jiidjiid isku xidhan ah.
Dadka ajaanibka ah marka ugu horeeysa maqla heeso Soomaaliga waxay ku khaldaan kuwa ItoobiyaSuudaan ama Carabtalaakiin Waxaa markaaba lagu garan karaa laxanka iyo habka ay u dhacayso heesta. Heesaha Waxaa sameeya dhowr nooc oo dad ah, kuwaasi waxaa ka mid ah abwaankalaxanmiistahafanaanka.
Inta ugu badan heesaha waxaa loo garaacaa qalab kala duwan, sida kabankadurbaankaturunbada. Laakiin wakhtiyadan dambe waxaa inta badan caan ah biyaanoda.
Si kastaba ha ahaate, deegaanada Koonfurta Soomaaliya iyo meelaha u dhow xeebaha waxaa caan ka ah noocyo kale oo heeso Soomaali ah. Kuwaasi Waxaa ka mida:   . Guud ahaan heesaha aan maanta naqaano ee Af Soomaaliga lagu qaado waxay soo bilaabmeen meeyihii. Taas macnaheedu ma ahan in dadka Soomaalida heesta aqoonin wixii ka horeeyay kii, laakiin Waxaa wakhtigan bilaabmey heesaha leh muusigakabankadurmaankaturunbada iyo wixii la mid ah.
Heesaha la qaadi jiray ka soo biloow meeyihii ilaa laga soo gaadho kii waxaa sida guud loo yaqaanaa qaraamihalka kuwa wakhtiyadii 70aadki ka dambeyay isla markaana kaban loo garaacayo loo yaqaano qaaci. Kani waa maqaal ku saabsan Shaleemada Soomaalida. Qoraalo kale fiiri filimsheekosuugaanhees.
Qoraalka gudaha oo kooban. Shaleemada Soomaaliya. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Gobolada Soomaaliya. Maamul Goboleedyada Soomaaliya. Book Category Portal. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal.
Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. In other projects Wikimedia Commons.Qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ayaa shalay lagu aasay gobalka Minnesota ee ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku noolyihiin kadib markii uu u geeriyooday cudurka COVID Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordhay tirada dadka u dhintay cudurka Covid oo haatan gaartay 5 kadib markii maanta lasoo tebiyey 3 qof oo cusub oo cudurka u dhintay.
Kalluumeysatada Soomaaliyeed ayaa caqabado kala kulma dhinaca jillaabashada iyo suuqyada ay kalluunka geeyaan, kuwaas oo qaarkood fayadhowr wanaagsan aanu ka jirin. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay Waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Maraykanka iyo howsha ay ku soo kordhisay waalidiinta Soomaalida. Cabsi ayaa soo food saartay bulshada ku nool magaalada Boorama, intii ka dambaysay hadalkii wasiirka caafimaadka Somaliland kii bishan uu ku dhawaaqay in hal qof oo ku sugan magaalada laga helay xanuunka Coronavirus.
Somaliland ayaa ku eedeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay faro galin ku hayso arrimaheeda gudaha, gaar ahaan xaaladda cudurka COVID Kuwo kale. Learning English. Raadi Raadi. Tusmada Maqalka.
RIWAAYAD CUCUB DUMARKA QURBAHA IYO RAGA LACAGTA LEH MAXAA KALA HEESTO 2018
Hore Xiga. Soomaaliya Sabti 18 April Calendar. April 17, Faaqidaadda: Halista Coronavirus ee Soomaaliya. April 15, Tirada dadka u dhintay COVID ee Soomaaliya oo korortay Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordhay tirada dadka u dhintay cudurka Covid oo haatan gaartay 5 kadib markii maanta lasoo tebiyey 3 qof oo cusub oo cudurka u dhintay.
April 15, Waxbarashada Guryaha Lagu Qaadanayo Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay Waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Maraykanka iyo howsha ay ku soo kordhisay waalidiinta Soomaalida. April 15, Cabsi la xiriirta cudurka COVID oo ka taagan Boorama Cabsi ayaa soo food saartay bulshada ku nool magaalada Boorama, intii ka dambaysay hadalkii wasiirka caafimaadka Somaliland kii bishan uu ku dhawaaqay in hal qof oo ku sugan magaalada laga helay xanuunka Coronavirus.
April 15, Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta aad. Back to top.Abwaan Axmed Saleebaan Bidde waxaa uu ka mid ahaa abwaaniintii Soomaaliyeed ee ku caanka noqday hal-abuurka iyo curinta suugaanta kala duwan, waxaana Abwaan Axmed Saleebaan Bidde uu uga duwanaa abwaaniintii kale ee Soomaaliyeed yaraantiisii ayuu soo bilaabay curinta iyo abuuridda suugaanta.
Abwaanku waxa uu leeyahay riwaayado iyo heeso caan noqday oo uu curiyey isaga oo arday ah, kuwaas oo la dhigay sannadihii illaa Abwaan Axmed Saleebaan Bidde markii uu waynaaday wuxuu noqday abwaan loo tiriyo aftahnimo badan xagga suugaanta iyo hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ah. Abwaanku waxa uu sameeyey Riwaayado caan noqday, kuwo kalena waxa uu ka soo noqday jilaa si weyn uga dhex muuqda, wuxuu kale oo uu leeyahay heeso badan oo ay qaadeen fannaaniintii Soomaaliyeed kuwii ugu caansanaa, aanna ka xusi karno kuwo ay qaadeen Mooge iyo Magool.
Sannadkii ayaa wariye Cabdifataax Cumar Geeddi oo ka tirsan bahda Radio Daljir waxa uu abwaanka kula kulmay magaalada Hargeysa isaga iyo abwaanno kale oo ay isku waayo ahaayeen Axmed Saleebaan Bidde. Abwaanku waxa uu Daljir uga warramay taariikhdiisii fanka iyo hal-abuurkaba, siiba xilligii uu bilaabay wax curinta, riwaayadaha iyo heesaha uu allifay iyo arrimo kale oo isla qaddiyadahaas la xiriira.
Abwaanku waxa uu marka hore ku bilaabayaa sharraxaad shaqsinimadiisa iyo taariikhdiisii nololeed. Raadreeb 25 Wararka Dhigaal Cusub. Dhigaal Duug ah. U dhaaf Halcelis Buri halceliska Negelka email-kaaga lama faafin doono.
Faallo Magac Email. Waa Hanti Gooni ah oo ha ku Xadgudbin. Optimised by Newsgain.I am an energetic, hard working and creative individual with an easy-going and friendly personality. I would like to describe myself as a loyal, enthusiastic, flexible, and sociable person with good communication skills. I am a radio presenter and i do write Somali plays, articles, stories, poems and songs. I also organise events and host shows to perform Somali's Traditional Culture to attract Somali teens living in London and across the UK.
Monday, 13 July Riwaayadaha Asahaaf Qoray. Qormooyinka Todobaadlaha ah Qeybtii 8aad: Riwaayadaha Asahaaf Qoray Tan iyo dabayaaqadii sanadihii ugu danbeeyay ee qarnigii 20aad ayaan waxa aan si weyn oo xooli ah aan u bilaabay xiiseyn gooni ah oo aan u qabay barashada iyo qoritaanka riwaayadaha, gabayada, sheekooyinka iyo weliba wararka.
Waxa aan daawaday, aqriyay aan isla markaana si qoto dheer u dhuuxay muuqaalo kala gedisan iyo weliba qoraalo ku saabsan suugaanta iyo curinta ama hal abuurka riwaaydaha kala gedisan ee ku saleysan bulsha weynta Soomaaliyeed. Kadib dadaal dheeri ah iyo barasho gooni ah oo aan galiyay suugaanta Soomaalida ayaa waxaa ii suurta gashay in aan wax badan ka fahmo qaababka kala gedisan iyo wejiyada ay leedahay Suugaanta Soomaaliyeed. Waxa aan aqriyay buugaag kala gedisan oo ka sheekeenaya habka curinta iyo gudbinta fikradaha kala gedisan.
Dhanka kale waxaa ii suurta gashay in aan bartay maadada Saxaafadda oo aan isla markaana ku bartay qaabka loo sameeyo sheekooyinka, qoraalada, abuuritaanka fikradaha iyo weliba gudbinta fariimaha ku saleysan nolosha bulshada. Waxaa ii suurta gashay in riwaayado kala gedisan oo aan qoray in lagu jilay wadamo kala gedisan oo aan markaa ku kala sugnaa. Haddaba riwaaydaha aan qoray, ula jeedooyinka aan u qoray iyo fariimaha ka danbeeyay ayaa waxa ay kala ahaayeen sidatan: 1- Riwaayaddii iigu koowaad ee aan qoray ayaa waxaan qoray taariikhdu markii ay aheyd dhammaadkii sanadkii Waxa aan joogay oo aan markaas ku sugnaa magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisha.
Waxa aan riwaayadaan ku jilnay magaalada Afgooye ee xarunta u ah gobolka Shabeelada Hoose. Riwaayadda ayaa waxa ay la magac baxday Dalxiis Iyo Daawasho.
Waxaa jilay isla markaana gacan weyn ka geystay dhallinyaro badan oo aan isla wada dhigan jirnay dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Al-Mathal oo ku yaalay koonfurta magaalada Muqdisha. Riwaayaddaan ayaa ula jeedadeedu waxaay aheyd in aan dalxiis ku tagno meelo ka mid ah dhulkeena hooyo ee Soomaaliya. Waxa aan markaas dalxiis ahaan u tagnay magaalada Afgooye oo 30kiilo meter u jirta magaalada Muqdisha oo ah caasimada dalka hooyo ee Soomaaliya. Dhanka fariinta riwaayadda ayaa aheyd in aan aan jaceyl weyn aan u heyno dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxa aan ku soo bandhignay beer weyn oo ku taala gudaha magaalada Afgooye. Waxaa igala qeyb qaatay dhammaan ardayda aan wax is kala baran jirnay iskuulka Somali Community Literacy Centre.Guud ahaan, dhaqanka Soomaalidu waa haybada iyo sharafta u gaarka ah bulsho weynta Soomaalida meel kastooy caalamka kaga dhaqan yihiin.
Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer. In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da' yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan. Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaacigaqaraamigaheesaha jaaska, ruwaayadahamajaajiloyinkafilimaantabandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga.
Dhaqanka Soomaalidu waa mid soo jireen ahaa kaasi oo jiilal badan iska dhaxleen. Sida taariikhyahanadu sheegeen wuxuu asal ahaan ka sameeysmay nolosha maalinle iyo xidhiidhka bulshada Soomaalidu la sameeysay bulshooyinka jaarka ah deriska iyo cilaaqaadka ganacsi iyo waxbarasho ee deegaanada fogfog. Sidoo kale dhaqanka Soomaalidu wuxuu in badan ku salaysan yahay diinta Islaamka oo dadka Soomaalida intooda u badan aaminsan yihiin.
Walhtiga gumeysiga, waxaa gaashaan u noqday dhaqanka Soomaaliyeed, waa dawladda iyo halganka [[Darwiish. Waxaa halgankaas ka mid ahaa abaanduulkii guud ee Ismaaciil Mire. Dhaqanka Soomaalidu waa mid soo jireen ahaa mudo aad u dheer, kaasi oo saameyn badan ku leedahay dadka baxaarida ah ee iskaga gooshi jirtey deegaano badan. Tusaale ahaan, Cunto Soomaalidu waxay salka ku heeysaa meelo badan oo caalamka ah; waxaana ku jira noocyo badan oo laga keenay wadanada jaarka ah sida CarabtaBariga Dhexe iyo meelo kale oo Aasiya ah.
Sida caalamka qiray, dhaqanka Soomaalidu wuxuu qani ku yahay fanka iyo suugaanta. Samayska midhaha fanka ayaa ah mid aad u cajiib badan. Waxaanu fanku inta badan ka turjumaa nolosha iyo Waayaha Bulshada. Dhinaca kale heesaha Af Soomaaligu waa kuwo ka duwan caalamka dhan.
Aslakooda waxay heesuhu u dhacaan hab jiidjiid isku xidhan ah. Dadka ajaanibka ah marka ugu horeeysa maqla heeso Soomaaliga waxay ku khaldaan kuwa ItoobiyaSuudaan ama Carabtalaakiin Waxaa markaaba lagu garan karaa laxanka iyo habka ay u dhacayso heesta. Heesaha Waxaa sameeya dhowr nooc oo dad ah, kuwaasi waxaa ka mid ah abwaankalaxanmiistahafanaanka.
Inta ugu badan heesaha waxaa loo garaacaa qalab kala duwan, sida kabankadurbaankaturunbada. Laakiin wakhtiyadan dambe waxaa inta badan caan ah biyaanoda. Si kastaba ha ahaate, deegaanada Koonfurta Soomaaliya iyo meelaha u dhow xeebaha waxaa caan ka ah noocyo kale oo heeso Soomaali ah. Kuwaasi Waxaa ka mida:   . Guud ahaan heesaha aan maanta naqaano ee Af Soomaaliga lagu qaado waxay soo bilaabmeen meeyihii.
Taas macnaheedu ma ahan in dadka Soomaalida heesta aqoonin wixii ka horeeyay kii, laakiin Waxaa wakhtigan bilaabmey heesaha leh muusigakabankadurmaankaturunbada iyo wixii la mid ah.
Heesaha la qaadi jiray ka soo biloow meeyihii ilaa laga soo gaadho kii waxaa sida guud loo yaqaanaa qaraamihalka kuwa wakhtiyadii 70aadki ka dambeyay isla markaana kaban loo garaacayo loo yaqaano qaaci.
Fanka Soomaalida waxaa ku jira noocyo badan, kuwaasi waxaa ugu caansan: qaraamigaqaacigajaaska, saarka, ruwaayada, majaajilada, filimaanta iyo wixii la halmaala. Waxa hubaal ah in qofkasta ku khalkhalayo farqiga qaaci iyo qaraami.
Qaacigu waa nooc ka mid ah heesaha kuwaasi oo la qaado ayadoo fanaanku fadhiyo, loo garaaco sida badan kaban iyo sacab kali ah, laakiin qaarkood lagu daro durmaan ama narso iyo turunbo. Si taasi ka duwan, qaraamiga Waxaa la garaacaya noocyo badan oo qalabka muusig ah, fanaaniintu way taagan yihiin ciyaarayaan isruxayaan ama way fadhiyaan.
Qaacigu waa nooc ka mid ah heesaha Soomaalida taasi oo leh dhandhan ka duwan noocyada kale ee Suugaanta. Qaacigu waa hees caadi ah oo loo tumayo kaban ama gitaardurbaan iyo sacab kali ah. Mararka qaar waxaa muusiga qaaciga lagu daraa turunbo. Heesaha qaacigu waa kuwo degan, dhandhan fiican leh, oo inta ugu badan si sahlan loo sameeyo.
How to check disk space in windows from command line
Aladdin naam toh suna hoga 144
thoughts on “Ruwaayadaha soomaaliya”
Dougul on Ruwaayadaha soomaaliya